आँधीखोला खवर | सेक्स पावर बढाउने भियाग्राको कहानीः भुल भुलैयामै अविष्कार भएका यी पाँच औषधी ! - आँधीखोला खवर सेक्स पावर बढाउने भियाग्राको कहानीः भुल भुलैयामै अविष्कार भएका यी पाँच औषधी ! - आँधीखोला खवर
एजेन्सी: | क्रिष्टोफर कोलम्बस सुन र मसलाका लागि एसियाको खोजीमा घरबाट निक्लेका थिए । तर उनले पत्ता लगाए अमेरिका । यस्तै किसिमबाट विश्वभरी कयौँ औषधी पनि गल्ती वा भूल भुलभुलैयामा पत्ता लागेका थिए । वैज्ञानिकहरु कुनै रोगको औषधीबारे अनुसन्धान गरिरहेका थिए, तर उनीहरुले बनाए कुनै अर्को रोगको औषधी ।
सन् १९१८ अघि सेक्स पावर बढाउनका लागि विभिन्न किसिमका तरिका अपनाइने गरिन्थ्यो। कोही जडिबुटीबाट शक्ति पाउन चाहनन्थे त कोही बाघको मासु खान थाले ।
सन् १९१८ मा स्पेनिस फ्लू विश्वका कयौँ मुलुकमा फैलियो । यो रोगबाट बच्नका लागि वैज्ञानिक एलेक्जेन्डर फ्लेमिङ फोडेले घाँटीमा खसखस आउने औषधीको खोजी गरिरहेका थिए । यो औषधीको खोजीको समयमा गल्तीले उनले ब्याक्टेरिया मार्ने औषधी पेनिसिलिनको आविष्कार गरे ।
यो औषधी खानाले सेरोटोनिन हर्मोन बढी मात्रामा बाहिर आउँछ जसका कारण मानिसले आपूmलाई खुसी महसुस गर्छन् । यसबाट वैज्ञानिकलार्इ यस्तो औषधी हात लाग्यो, जसले शरीरमा हर्मनलाई कम वा धेरै प्रवाह गरेर मानिसलाई डिप्रेशनबाट बाहिर निकाल्न सक्छ । साझा सवाल डटकमबाट